Guusha Soomaalida Itoobiya iyo guuldarrada hoggaamiyayaasha Soomaaliya – Radio Daljir
Guusha Soomaalida Itoobiya iyo guuldarrada hoggaamiyayaasha Soomaaliya
Agoosto 25, 2018 10:35 g 0
SOCRATES – Soomaali: “Caqliyahanka diida in uu wax xukumo ama xukunka ka qaybqaato ha isku diyaariyo xanuunka xukunka doqonka.”
SOCRATES – English: “The wise who refuse to rule should prepare to suffer the rule of idiots.”
Abukar Arman baa qoraalkiisii ugu danbeeyey ee bishaan Ogoosto waxa uu ku bilaabay, “Isbaddalka siyaasadeed ee ka hanaqaaday Geeska Afrika waa mid la dhihi karo waa filanwaagii aan la saadaalin ee qarnigan 21aad illaa iyo hadda.” Waxba yaynaan war kugu daalin, laakiin saadaal iska daa e, hoggaamiyaha Soomaaliyeed ee maanta nool iyo waliba kan talada hayaa marnaba isma uu oran, maankiisana ma uu galin in ay Soomaali jirto, ay han leedahay, Soomaali nooshahay, in Soomaali sharaf leedahay, in Soomaali is rabto colaad gumeysi iyo cagojugleynba ha lagu hayee, in Soomaali ay dadkooda iyo dalkooda jacelyihiin, in la iska-daba-imaan doono, in la xisaabtami doono, in Soomaali xasuus leedahay oo Soomaalidu ay maanta wax qoraan, waxna akhriyaan, yuusanba gaarin heerkii ugu habboonaa e.
Maya, hoggaamiyaha Soomaaliyeed intaas ma uu saadaalin, mana uu garawsan, laakiin xisaabtan ma foga!
Inta aynaan u degin gablanka iyo gunnimada ku habsaday hoggaamiyihii Soomaaliyeed, aan ku hormarno halganka hoggaanka cusub ee Dowladda Soomaalida Itoobiya, Madaxweyne Mustafa Omer. Mustafa in uu ahaa halgamaa iyo sida uu uga qaybqaatay halganka xoreynta gobolka waa maalin kale, laakiin aan maanta idin la qaybsano hadalo wax-ku-ool ah, waxtarna u leh qof kasta oo Soomaaliyeed oo dadnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa shalay shaki galiyey.
11kii Luulyo markii la soo gabagabeeyey shirkii ONLF/JXGO ee Casmara, Md. Mustafe waxa uu bartiisa Facebook soo dhigay qoraal qiiro leh, qoraalkaas oo afka Ingiriiska ku qornaa haddii uusan shalay macno kuu lahayn, uusan kaa taaban boogta ku madoobaatay, maanta dib-u-jalleec oo ka farabuuxso.
Mustafe waxa uu qoray, “Dhib kasta oo magaca isireysan ee jabhaddu igu hayaba, haddana wax la xaqiri karo ma aha in jabhaddu ay dagaal adag kaga hortimid xukuumaddii Itoobiya ee TPLF! Waxa ay ahaayeen Soomaalida kaliya oo intay dhulka xarriiqeen yiri diidnay gumeysiga TPLF ay 27kii sano ee la soo dhaafay ku haysay ummadda Soomaaliyeed!”
Bal mar kale akhri qoraalka. Bal mar kale akhri oo ka fakar kudhawaad 30kaas sano waxa heer foolxumo kala duwan qofka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyihiisa la mariyey, ha ahaado Soomaaliga Itoobiya ama kan Soomaaliya. Ka fakar kuwa loo diidey in ay Soomaali sheegtaan. Ka fakar kuwa laga dhaadhiciyey in aysan Soomaali ahayn. Kuwa rumeystay in Soomaali cadow u tahay laakiin ay Tigree xigto yihiin. Bal mar kale ka fakar waxa Soomaali lala damacsanaa iyo meesha la geeyey. Ha illaawin in magacii Soomaaliyeed xataa laga cararay.
Intaas adoo maanka ku haya, haddana maanta iyo qoraal kale oo ka soo baxay Madaxweyne Mustafa Cumer, afka Ingiriiska haba ku qornaadee.
Qoraalkii oo Madaxweyne Mustafe Cumar bartiisa Facebook saarnaa waxaa kamid ahaa:
“Maalmihii qofka Soomaaliga ah loo cagajugleyn jirey, la handadi jirey, la dhibi jirey, looguna awood-sheegan jirey in ay ka tagaan dhaqankooda iyo Soomaalinimadooda ayada oo loogu hanjabayo kalmadaha ma “Soomaali weyn” iyo “dhulkii hooyo” waa dhammaadeen.
Mustafa oo qoraalkiisa sii wata waxa uu qoray, “kalmadahaas na loo kuma hanjabi karo mar danbe, mana aha kuwo na dhaqan-rogi kara, naga cayrsan kara Soomaalinimadeena. Waxaan nahay dad jira oo jooga oo Soomaaliyeed oo taariikh, dhaqan bulsho iyo mid dhaqaale ka dhexeeyo Soomaalida Geeska Afrika. Cidina xaqiiqdaas ma badali karto, mana tirtiri karto.”
Mustafe oo aad mooddo in uu la hadlayo inta magaca Soomaalinimada cuqdad ka qaadday ama gumeysigii 27kii sano ee la soo dhaafay uu dhaqan-rogey, waxaa uu qoray, “Sidaas darteed wax kasta oo uu gumeystuhu yiraahdo ama la yimaadaba waan isku duubaynaa Soomaalinimada. Lafaha dadkeenna kuwii ugu fiicnaa uguna geesisanaa waxa ay teedsanyihiin Caysha illaa Doolow. Waxa ay u soo halgameen magaca, maamuuska iyo xorriyada qofka Soomaaliyeed. Ku caasiyi mayno. Waxaan sharfaynaa halgankii ay soo galeen annaga oo ku sharfayna in aan noqonno sidii ay nala rabeen.”
Intaas haddii uu Madaxweyne Mustafa Cumar maankaaga si fiican u deeqsiiyey, kuguna baraarujiyey Soomaalinida, ku xasuusiyey in aad nooshahay, aad sharaf leedahay, oo aad Soomaali ka dhalatay, awoodna aad u leedahay gumeysi-diidka, haddana ha illaawin inta hogaamiye Soomaaliyeed oo Korneel Gebre u talin jirey, maanta qaar noolyihiin, qaar talada dadka iyo dalka hayaan, qaar shalay yiraahdeen “Ogaadeen Soomaali ma aha meeshaanna halaq-mareen ma aha!” oo maantadaan haddana la soo taagan in ay na matalaan oo talada dadka iyo dalka Soomaaliyeed dan ugu toorranyihiin.
Haah oo qaladaadka hoogaamiyaha Soomaaliyeed uu Soomaali iyo Soomaalinimada ka galay waa badanyihiin, laakiin maanta shalay ma aha oo maanta yaynaan sharfin kuwii shalay magaca Soomaaliyeed boorsada ku ritay, Soomaalina kala diray, qaar iibiyey, qaarna inkirey. Aan sharafno Soomaalinida. Aan mid-mid isku sharafno. Aan farta ku fiiqno kii shalay rabay in uu na kala diro, shalay cadowga la safnaa, maantana raba in aan talo u dhiibano.
Soomaalinimada iyo Soomaaliya ma ah kuwo mugdi ku jira. Aan diidno kii mugdi galinaya.
Diiwaanka Radio Daljir SOOMAALIYA
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20815